लेडिज पकेटमारको कोड भाषा- प्रहरीलाई ‘बकुल्ला’ पैसालाई ‘रामराम’: दैनिक ५० हजार आमदानी, चोरेरै गोंगबुमा घर ! « गोर्खाली खबर डटकम
लेडिज पकेटमारको कोड भाषा- प्रहरीलाई ‘बकुल्ला’ पैसालाई ‘रामराम’: दैनिक ५० हजार आमदानी, चोरेरै गोंगबुमा घर !
काठमाडौं। प्रहरी कन्ट्रोल १०० मा एक महिलाले फोन गरिन् । उनले काठमाडौंको सीतापाइलामा चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बसमा एक वृद्धको पकेटबाट पैसा चोरिएको सूचना मात्र दिइनन्, चोर्ने व्यक्तिको हुलिया समेत बताइन्।
उनले प्रहरीलाई फोन मात्र गरिनन्, गाडीमा होहल्ला समेत गरिन् । उनले होहल्ला गरेपछि चोरिएको ३४ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बसमै फालेर एक महिला र दुई पुरुष गाडीबाट फात्तफुत्त झरिहाले।
फोन प्राप्त भएको १० मिनेटमा गाडी खसी बजार आइपुग्दा प्रहरीले छेक्न भ्यायो । शंकास्पद अन्य व्यक्ति पनि झरिसकेकाले पक्राउ गर्न भने सकेन।
त्यसपछि ती महिलाले बताएको हुलिया लिएर प्रहरीले वरपर खोज्न थाल्यो । एक युवती पक्राउ परिन् । त्यसपछि प्रहरीले ती युवतीसँग केरकार गर्‍यो । त्यसपछि कलंकीकै चिया पसलबाट अर्की युवती पनि पक्राउ परिन्।
पक्राउ पर्नेमा थिए, कामनपा– ११ गोंगबुकी की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखु घर भई हाल काठमाडौं मनमैजु बस्ने २३ वर्षीय सिर्जना उप्रेती।
उनीहरूले उपत्यकामा कति प्रहरी पोशाकमा खटिन्छन् ? कति प्रहरी सादा पोशाकमा खटिन्छन् ? कुन ठाउँमा खटिन्छन् ? प्रहरी कसरी हिँड्छन् लगायतका गतिविधि समेत जानकारी राख्ने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ।